Il messaggio della Madonna a Medjugorje, 6 Giugno 2020: Maria parla dei falsi profeti | Io amo Gesù
Ozi nke nne anyi di na Medjugorje, 6 June 2020: Mary n’ekwu maka ndi amuma ugha
di Paolo Tescione - June 6, 2020
Ndị na-ebu amụma ajọ ihe bụ ndị amụma ụgha. Ha na-ekwu, "N'afọ ahụ, n'ụbọchị ahụ, mbibi ga-abịa." M ekwuola mgbe nile na ntaramahụhụ ga-abịa ma ọ bụrụ na ụwa agbanweghị. N’ihi ya, m na-akpọ mmadụ niile ka ha chegharịa. Niile dabere na ntụgharị gị.
KPUKWU ANYI ANY.
O Buddha na-amaghị nwoke, lee, anyị na-akpọ isiala n’ihu gị, na-eme ncheta maka mbịpụta mbịarịa nke onyinye gị, dị ka ihe ama maka ịhụnanya na ebere gị. Anyi maara na oge niile ebe I di njikere ịza ekpere anyi, bu umu anyi; mana enwere ụbọchị na awa ole ị ga-eji nwee obi ụtọ ịgbasa akụ nke ebube gị karịa.
Ekele, anyị abịakwute gị, juputara na nnukwu obi ekele na ntụkwasị obi a na-akparaghị ókè iji kelee gị maka onyinye dị ukwuu ị nyere anyị, na-enye anyị onyinyo gị, ka o wee bụrụ ihe ngosipụta nke ịhụnanya na nkwa nke nchebe maka anyị. Anyi ekwe gi nkwa na, dika ochicho gi si di, Miri Nsọ ga-abu ihe nlere nke ọnụnọ anyi n’akuku anyi; ọ ga-adị ka akwụkwọ anyị ga-amụ, na-agbaso ndụmọdụ gị, etu ị hụruru anyị n'anya, na ihe anyị ga-emerịrị, ka nzọpụta wee nweta Jizọs n’anyị.
Ee, obi gị nke dụpuworo, nke nọchiri anya ya na Nlekọta, ga-anọkwasịrị anyị n'ụzọ ihe atụ ma mee ka ọ bụrụ ngọngọ nke gị; ọ ga - eme ka ọ hụ Jizọs n ’ịhụnanya ma wusie ya ike ikwesi ntụkwasị obi n’ebe ọ nọ, kwa ụbọchị karịa.
Nke a bụ oge awa gị, Meri, oge ịdị mma gị na-ezighi ezi, nke ebere gị dị ebube; elekere mgbe ị mere iyi nke ebube na ihe ịtụnanya juputara n’elu ụwa site n’etiti ihe gị.
Grant, nne, n’oge elekere a, nke na echetara anyi mmụọ obi uto gị, na inye anyị ihe ịrịba ama nke ịhụnanya gị, bụkwa oge awa anyị: oge ​​nchegharị ezi obi anyị na oge nke mmezu zuru oke nke olu anyị si n’aka gị.
I kwere nkwa na ekele ga-abu oke nke ndi jiri obi ike jụọ ha; mgbe ahụ tụgharịa legharia anya na ịrịọ arịrịọ anyị. Anyị nwere ike ikwesighi inweta amara gị: ma olee onye anyị ga-echigharị, Meri, ma ọ bụrụ na ịgaghị gị, onye bụ nne anyị, onye Chineke debere amara ya niile?
Meere anyị ebere ma gee anyị ntị.
Anyi na-ario Gi maka Nlebara Anya gi na ihunanya nke dubara Gi nye anyi Onyinye anyi di egwu.
Onye nkasi obi nke ndi wedara n’ala, ma obu ebe mgbaba nke ndi mmehie, ma obu ndi enyemaka nke ndi Kraist, ma obu nne nke ncheghari, nyere anyi aka.
Ka Medal gị gbasaa ụzarị gị bara uru n’arụ anyị na ndị anyị hụrụ n’anya, gwọọ ndị ọrịa, nye ezinụlọ anyị udo, nye onye ọ bụla ike ịgba akaebe banyere okwukwe ahụ. Ọ na - ewepụ ihe egwu niile ma na - ewetara ndị na - ata ahụhụ obi, na - akasi ndị na - eti mkpu, ọkụ na ume ike.
N'otu ụzọ, Meri, anyị na-arịọ gị n'oge a maka nchigharị nke ndị mmehie, ọkachasị ndị anyị hụrụ n'anya.
Gị onwe gị, onye site n’inweta okwukwe na Alfonso Ratisbonne gị nke ekpughere onwe gị dịka nne nke ntụgharị, cheta ndị niile na-enweghị okwukwe ma ọ bụ bi n’ebe dị anya site n’amara.
N’ikpe azu, gi Meri, mgbe anyi huru gi n’anya, kpokuo gi ma jeere gi ozi n’uwa, anyi ga-eto gi rue mgbe ebighi ebi site n’iso gi nwe obi uto nke Paradais Amen.